Turjumaanada Webseetkeena: Hanaanka iyo Waqtiga | Boston School Finder
Dib u Furida Dugsiga
Turjumaanada Webseetkeena: Hanaanka iyo Waqtiga
Macluumaad dheeri ah oo kusaabsan hanaankeena turjumaada iyo waqtiga ay socoto hakaan hoose ka akhriso.
Qayb kamid ah waxyaabaha kadhiga Boston magaalo qaas ah waa bulshadeeda kaladuwan. Dadka daafaha caalamka iskaga kalayimid ayaa uyaqaana Boston "guriggooda," taasoo macnaheedu yahay in luuqadaha dhamaan daafaha caalamka looga hadlo magaaladaan! Aalada Boston School Finder ayaa jirto si ay oga caawiso qoys kasta oo reer Boston ah inuu helo dugsi uu cunugoodu dhigto - ayadoon laga fiirinayna luuqadiisa hooyo.
Fiirfiirinta diiwaangalinta dugsiga ayaa ah mid leh wareer kugu filan. Waana taas sababta aan webseetkeena ugu turjunay ilaa sideed luuqadood:Carabi, Chinese, Ingiriis, Haitian Creole, Portuguese, Soomaali, Isbaanish iyo Vietnamese.
Waxaan kufaraxsanahy inaan si hufan ula shaqayno iskaashatadeena turjumaada si aan turjumaado saxan oo dhamaan luuqadaha ah ugu qorno macluumaadka webseetkeena. Si aan uxaqiijino saxnaanta, waxaan siinaa firaaqo dhan 48 saacadood laga bilaabo xiliga macluumaadka cusub lasoo galiyo ilaa inta laga turjumaayo dhamaanteed. Sababtaan awgeed, waxaad arki kartaa bogaga ama qaybaha qaarkood ay qayb ahaan turjuman yihiin xili gaar ah oo aad booqatay barta. Markaad aragto in macluumaadka qaar turjuman yahay, waxay ubadan tahay inay kadhigantahay in qayb kamid ah macluumaadku cusub yahay, aana kujirno shaqada turjumiidiisa. Haddii aad fiiriso barta 48 saacadood kadib, waa inay si buuxda uturjumantahay. Hadaysan turjunayn, fadlan noosoo sheeg!
Nagala soco baraha bulshada iskana qor waraaqdeena wararka si aad uhesho macluumaadka turjumaada xiliga saxda ah!